Wasiirka Waxbarashada Puntland oo Shaaciyay xiliga loo Fariisnayo imtixaanada Dugsiyada Sare [DHAGAYSO] – Radio Daljir
Maajo 10, 2015 9:36 b 0
Axad, May 10, 2015 (Daljir) — Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta saree e Puntland ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday xilliga loo fariisan doono imtixaanaadka dugsiyada saree e Puntland, taasoo noqon doonta 23ka bishaan aynu ku jirno ee May.
Sida qoondaysan imtixaannada dugsiyada sare ayaa si siman oo iskumar ah loo wada fariisan doonaa dhammaanba gobollada iyo degmooyinka Puntland, taasoo ah tallaabo horay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta saree e Puntland ay u dejisay.
Wasiirka waxbarashad iyo tacliinta saree e Puntland Dr. Cali Xaaji Warsame oo haatan ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenaya oo arrinkaasi imtixaanka uga warramay Radio Daljir ayaa sheegay haatan in uu socdo diyaargarawgii imtixaanadka, loona fariisan doono 23ka bisha waa dugsiyada saree e Puntaland ne.
Maslax Muqtaar ayaa telefonka ku waraystay wasiirka oo marka hore waydiiyey xilliga ay wasaaraddiisu u qoondaysay qabashada imtixaanaadka.
Warkii_Fiidnimo_10_May_2015 – Wariye Maxamed C/llaahi Cali Kooshin (Dhagayso)